Thola Izinkampani Ezivakashela Isiza Sakho | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 13, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kuleli sonto ngiye embonisweni omuhle we Ukusakaza Kwe-Demandbase?. Ukusakaza kweDemandbase kuyinto I-Adobe AIR uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi ubheke ithrafikhi yakho yewebhu ngesikhathi sangempela.
UDavid Lieberman, Iphini Likamongameli Wezokuthuthukiswa Kwebhizinisi uchaza iDemandbase Stream:
IDemandbase Stream uhlelo lokuqala lweWebhu olungenaziphequluli elenza abantu abathengisayo nabamakethayo bathole ukuthi imaphi amabhizinisi avakashela iwebhusayithi yabo, ukuthi bathanda ini, nokuthi bangaxhumana nobani. Ngokulanda ifayela le- khulula Ukusakaza Kwe-Demandbase? ithuluzi bese ulixhuma kwiWebhusayithi nakuDemandbase Direct ?, noma ngubani angaguqula ukuvakashelwa kweWebhu okungenzi lutho kube imikhombandlela yokuthengisa engenzeka.
Kusuka kwethikithi eligijima kubasebenzisi bedeskithophu bangabuka imininingwane ye-traffic yebhizinisi, imininingwane yenkampani, noxhumana nabo abanconyiwe ngemizuzu. Abasebenzisi futhi bangasetha izintandokazi zokuhlunga ithrafikhi evela ngaphandle kwendawo yokuthengisa noma evela kubahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi (ISP's).
Lokhu kuyishintsha impela imboni! Uma ungumakethi osebenza nge-B2B, ubukwazi ukubona kuphela lezo zinkampani ezibhalise kusayithi lakho nge-Call to Action (i-whitepaper download, i-webinar, njll.) Nezinye izivakashi bezingaziwa. Ngalobu buchwepheshe, ungabona ukuthi ngubani osesizeni sakho ngesikhathi sangempela!
Uhlobo lwe-Pro lujabulisa kakhulu, luyalandelela futhi lukwenza ukwazi ukulanda idatha ye-firmagraphic! Khuluma nge-generator ehola. Yize bengakunikezanga ngemininingwane yabo, lokhu kuzokwenza ukuthi ukwazi ukuxhumana nenkampani ngenkuthalo ukuze ubone ukuthi ngabe beludinga olunye usizo. Lokhu ekugcineni kuzoholela ekuthengiseni okwandisiwe!
Tags: ukumaketha kwe-bluetoothI-digbyindawo yendawo ye-digbyukuhlolwa kwe-beta ye-iphonemobile wendawoindawo uyaziUMari Smithibhukumaka yomphakathiifu lethegi
Ividiyo ye-HD ingaba yingxenye yecebo lakho lokumaketha
Dec 19, 2008 ngo-6: 53 PM
Ithuluzi elisha elihle. Umnyombo webhizinisi lethu ububhekise kwamanye amabhizinisi, ngakho-ke lokhu kungasiza kakhulu. Kubukeka sengathi kuzoba kuhle "ekufudumaleni" imikhondo ebandayo.